Samsung eweputara Nougat gam akporo maka Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge | Gam akporosis
Samsung weputara Nougat gam akporo maka Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge
Mgbe ọtụtụ izu nke ule na ọtụtụ ga-ahụwo a ezi mgbe ebighị ebi, n'ikpeazụ ndị nwe a Galaxy S7 ma ọ bụ a Galaxy S7 Edge ga-enwe ike na-amalite na-anụ ụtọ niile ozi webata site ọhụrụ version nke Google sistemụ arụmọrụ maka mobiles.
N'ezie, ụlọ ọrụ South Korea Samsung amaliteworị iwepụta ndị ọrụ gam akporo 7 Nougat ukara maka Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge ngwaọrụ..
Ndị ọrụ ahụ ndị nweburu ụdị ahụ beta Gam akporo 7 Nougat kwesịrị inweworị mmelite dị na smartphones ha nke na-eru ihe dịka 215 MB; Ọ bụrụ na ọ bụghị, nwee ndidi, mmelite a ga-adịte aka. Ka ọ dịgodị, Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge nwe ndị na-abụghị akụkụ nke ikpe ikpe ga-enweta zuru update. N'ezie, site na Sammobile ha na-egosi nke ahụ Samsung na-ebute ndị na-agba beta ọsọ.
Ọ bụ ezie na a tọhapụrụ gam akporo Nougat na mbido Ọktoba gara aga, nke bụ eziokwu bụ na Samsung emeela ngwa ngwa ịmalite mmelite maka ihe dị ugbu a na ama ama ya, bụ Galaxy S7 na S7 Edge, ọkachasị ọ bụrụ na anyị echebara ọtụtụ a na-enye atụmatụ ọhụrụ na mgbanwe maka ọnụahịa ndị a, gụnyere interface ndị ọrụ ọhụụ.
Otu beta nke Samsung ekwenyela na mbụ na a ga-ewepụta nsụgharị ikpeazụ nke Nougat na Jenụwarị 17th, mmelite ahụ eruola ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu tupu mgbe ahụ, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ụbọchị ahụ na-ezo aka na ndị ọrụ na-abụghị akụkụ nke mmemme beta, n'ihi ya, anyị ka ga-echere ntakịrị iji jide n'aka na ọ bụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, nnweta gam akporo 7.0 Nougat (ọ bụghị ụdị nke 7.1.1) ga-aga n'ihu ịgbasa na ndị ọrụ niile nke Samsung Galaxy S / na S7 Edge na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung weputara Nougat gam akporo maka Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge
Ihe onyonyo ndị a nwere ike ikpughe ọkwa nke Nokia maka 2017, Nokia 8.